Archive du 20190222
Fifidianana solombavambahoaka Vonona tanteraka ny TIM- K25
Mifanaraka tsara ary efa vonombonona tanteraka hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka hotanterahina amin’ny 27 mey 2019 izao ny K 25 manontolo tarihan’ny antoko TIM.
Vina IEM Hanahirana ny fanatanterahana azy
Maro ireo mpanao politika tafiditra sy mikasa hiditra ao anatin’ny fitondrana Rajoelina. Mety hisy hahita izany ho lojika satria politika ny fitantanana firenena.
Fitondrana TGV Serasera sy sandry fotsiny…
Taorian`ny filankevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo, nivoaka ny anaran`ireo tompon’andraikitra ambony handrafitra ny governemanta Ntsay.
Fitondrana ankehitriny Fisamborana no misongadina, hoy ny Natiora
Ho feno 10 taona amin’ity taona ity ny antoko politika Natiora tarihin’ny filohany, Mihari Ni Recho.
Fametrahana ireo governora Mety hananosarotra
Raha fintinina, tsy misy mpanohitra hatreto ny fitondrana Rajoelina. Sady an’ny filoham-pirenena ny fahefana mpanao lalàna no mpanapa-kevitra.
Fizarana seza anatin’ny fanjakana Mahazo tombony ireo mpahay lalàna
Razafimanantoanina Mamitiana Ben’ny tanàna vonona ho solombavambahoaka
« Ho kandidà solombavambahoaka ny tenako amin’izao fifidianana izao ho mariky ny fampandraisana andraikitra ny tanora amin’ny fitantanan-draharaha sy fampandrosoam-pirenena mifanaraka amin’ny tarigetran’ny fitondrana ankehitriny »
Asan’ ny Psikology Efa misy sahy misandoka ihany koa
Nitsangana tamin’ny volana novambra 2018 ny holafitry ny Psikology ary misy mpikambana miisa 17 amin’izao.
Asa fiambenana sy fiarovana Miha mahazo vahana eto Madagasikara
Mihamahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Ankoatra ny fakana an-keriny dia misy hatrany ny fanafihana mitam-piadiana. Saika mametraka ny fitokisany amin’ireny orinasa tsy miankina manao asa fiambenana ireny ny ankamaroan’ny olona.
Mihamahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Ankoatra ny fakana an-keriny dia misy hatrany ny fanafihana mitam-piadiana.
Tsy fandriam-pahalemana Basy maro sy rongony 10 gony tra-tehaky ny polisy
Mihanaka ny zavamahadomelina, maherin'ny folo gony ny rongony tratran'ny haraton'ny polisim-pirenena, nandritra ity volana febroary ity. "10 gony no tratra tany Ihosy.
Lalao hifaninanan’ireo ministera Ho avy koa ny fanorona, ny katro ary kabary
Hampidirina holalaovin’ireo mpiasam-panjakana ara-dalàna ao anatin’ny fanatanjahantena karakarain’ny ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires ) ihany koa manomboka izao ny katro sy ny fanorona ary ny kabary.
Baolina Kitra CAN 2019 Mihetsiketsika i Tinoka Robeto sy Nicolas Dupuis
Fantatra fa amin’ny 2 martsa 2019 ho avy izao no hihaona sy hifampidinika amin’ny « Comité de normalisation du foot-ball Malagasy »
Famaranana baolina kitra Matsiatra Ambony Hiezaka tsy hamotsotra ny amboara ny Zanakala Fc
Hangotraka ny ao amin’ny kianja maoderina ao Ampasambazaha Fianarantsoa amin’ny alahady 24 febroary ho avy izao,
Atomboy avy any ambony ny ohatra !
Mendri-piderana ny fihetsiky ny fitondram-panjakana, indrindra fa ny filoham-pirenena naneho fa tsy hisy fandeferana na « tolérance zéro » eo anatrehan’ny trangana kolikoly ataon’ny mpiasam-panjakana.
MANDRAKA RN2 Fiara be 5 niara-nihitsoka
Sahirana ny mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa, omaly alakamisy 21 febroary antoandro.
Oniversiten’Antananarivo Kandida 3 hifaninana ho filoha
Kandida miisa 3 no hifaninana amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny oniversiten’Antananarivo hisolo ny Profesora Ramanoelina Panja, izay efa nahavita taom-piasana miisa roa.
Orinasa Sirama Mila vatsiana fitaovana
Taorian’ireny fanambarana nataon’ny mpiasan’ny SIRAMA nisesisesy ny amin’ny tsy fahazotoana miara-miasa amin’ny Kaompania Vidzar sy ny fangatahana tolobidy lavitry ny kolikoly ireny, dia efa nisy ny solontenan’ny fanjakana nijery ifotony ny raharaha.
Sehatra fizahantany Hampahafantarina ny mampiavaka ny any Atsimo
Hanatsara indray ny fizahantany ny fisokafan’ny zotram-piaramanidina La Réunion – Fort Dauphin – Tuléar.
Kolontsaina an-tanàn-dehibe Hatao fandaharana amin’ny onjam-peo ny “Riman’Art B”
Fandaharana ara-kolontsaina vaovao mandeha ao amin’ny onjam-peo MBS Radio 95.4FM sy ny Radio Mada 100.8FM ny « Riman’Art B » hanasongadinana ny kolontsaina an-tànan-dehibe, toy ny Rap, R&B, Roots, Reggae,....
Tsy fandriampahalemana eto Antananarivo Nidina ifotony ny praiminisitra
Ny alin’ny 20 febroary 2019 dia nidina ifotony nijery ny fandrindrana ny lamina napetraka amin’ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny Tafika Malagasy,
Fandraisana ireo traboinan’ Ampamarinana Efa feno ny « village Voara »
Fianakaviana marobe mivangongo amina tranoheva miisa folo traboina avy etsy Ampamarinana vokatry ny fianjeran’ny vatobe no fantatra fa mbola tavela etsy amin’ny Infp Mahamasina amin’izao ary tsy nahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana intsony.
Traboinan’Anosibe Andrefana II Nokarakarain’ny kaominina
Nitondra fanampiana ho an’ireo traboina vokatry ny hain-trano tao Anosibe Andrefana II ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny alatsinainy 19 febroary 2019 lasa teo.
Vidin-kazo Ahiana hiakatra avo roa heny…
Tsy mbola misy fiantraikany mivantana amin`ny mpanao fanaka sy mpivaro-kazo ny fanapahana navoakan`ny minisiteran`ny tontolo iainana sy ny ala tamin`ny 29 janoary lasa teo, izay mandrara ny fanapahana hazo eto amintsika.
Fadin-tseranana eny Ivato Nohatsaraina ny fomba fiasa
Taorian’ny fidinana ifotony nataon’ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola, Richard Randriamandranto, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato tamin’ny farany teo dia nisy ny fanomezana torolalana sy baiko ny amin’ny fanatsarana ny fomba fiasan’ny fadin-tseranana.
Ady amin` ny famotsiam-bola Hitsirika ireo sehatra tsy ara-dalàna ny SAMIFIN
Misy sehatr`asa, faritra… hisian`ny famotsiam-bola eto Madagasikara. Hatramin`izay miainga amin`ireo rafitra mpikirakira vola na ireo sehatr`asa natao hanao fanambarana na rafitra voara-maso ny fitsirihana ataon`ny sampana misahana ny ady amin`ny famotsiam-bola (SAMIFIN).